အနောက် Kalimantan, Sanggau ခရိုင်, အငယ်တန်းနှင့်အကြီးတန်းအထက်တန်းကျောင်းမြီးကောင်ပေါက်အပေါ်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုအကျိုးသက်ရောက်မှု၏ပြဌာန်းခွင့် (2019) - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
တစ်နှစ်တာ: 2019, အတှဲ: 10, Issue: 3
ပထမစာမျက်နှာ : (941) နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ: (945)
ISSN Print: 0976-0245 ။ အွန်လိုင်း ISSN: 0976-5506 ။
အပိုဒ် Doi: 10.5958 / 0976-5506.2019.00623.5
Suwarni Linda1,*, Abrori1Widyanto Ronny1
1Universitas Muhammadiyah Pontianak, အေ Yani လမ်း, အနောက် Kalimantan, 78124
* သတင်းထောက် Author: လင်ဒါ Suwarni ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန, ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဌာန, Universitas Muhammadiyah Pontianak, JL ။ A. အ Yani အမှတ် 111, Pontianak အနောက် Kalimantan, အင်ဒိုနီးရှား, Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နည်းပညာတက္ကသိုလ်တိုးတက်လာပါကပိုမိုလွယ်ကူညစ်ညမ်းဝင်ရောက်ဖို့ပါစေ။ အဆိုပါညစ်ညမ်းထိတွေ့သက်ရောက်မှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားအလွန်ပြင်းထန်သောပြဿနာဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသုတေသနအဓိကရည်ရွယ်ချက်များ Sanggau ခရိုင်အတွင်းအငယ်တန်းနှင့်အကြီးတန်းအထက်တန်းကျောင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အပေါ် 171 အငယ်တန်းပေါ်ကောက်ယူသောညစ်ညမ်းထိတွေ့သက်ရောက်၏ပစ်မှတ်ကိုသိရန်အရာလက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းဒီဇိုင်းကိုချဉ်းကပ်နဲ့အရေအတွက်သုတေသနဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီသုတေသနရလဒ်အများဆုံးဖြေဆိုသူအင်တာနက် (62.0%) မှတဆင့်အပါအဝင် 78.4% ၏ဓါတ်ပုံများ (ပုံ) မှတဆင့် access ကိုညစ်ညမ်းခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။
ဖြေဆိုသူများ၏ညစ်ညမ်းထိတွေ့သက်ရောက်အလင်းအဆင့်ကို (စွဲ, တင်းမာမှုများနှင့် desensitization ဇာတ်စင်) တွင်ရရှိသောခဲ့သည် 29.2% ဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်အလေးချိန်အဆင့် (လုပ်ရပ်ထွက်ဇာတ်စင်) 70.8% ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါညစ်ညမ်းထိတွေ့သက်ရောက်၏သိသာထင်ရှားသောဆုံးအဖွတျ access ကို (p တန်ဖိုးကို = 0.039, PR စနစ် = 5.765), ကျား, မ (p တန်ဖိုးကို = 0.0001; PR စနစ် = 3.600) ၏အချိန်ခဲ့ကြသည်, Duration: access ကို (p တန်ဖိုးကို = 0.037, PR စနစ် = 3.730) နှင့် မီဒီယာအမျိုးအစား (p တန်ဖိုးကို = 0.001; PR စနစ် = 2.268) ။ ချိန်းတွေ့, နေအိမ်သို့ status ကို၏ status နေစဉ်, မိဘများ၏အိမ်ထောင်ရေး status ကိုသိသိသာသာပစ်မှတ်အချက်မဟုတ်ကြပေမယ့်ညစ်ညမ်းထိတွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဆီသို့တစ်ဦးအပြုသဘောလမ်းကြောင်းသစ်ပြသခဲ့သည်။
ဒါဟာညစ်ညမ်းရယူသုံးမျက်နှာသို့အဓိကကာကွယ်တားဆီးရေးအဖြစ်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အပေါ်ညစ်ညမ်းများ၏အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များကိုအကြံပြုသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မိသားစုနှင့်ကျောင်းများများ၏ပူးပေါင်းမီဒီယာကိုသုံးပြီး၌၎င်း, လုပ်ရပ်ထွက်အဆင့်တွင်နေသောဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ပညာရှိဖြစ်စောစောမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကူအညီများပေးဖို့လိုအပျနေကြသည်ကျန်းမာပြုမူဖို့အထူးကြပ်မတ်ကုထုံးလိုအပ်ပါတယ်။